ရန်ကုန်မြို့က ပထမဆုံး ဂေးရှိုး
ဒီပုံလေးတွေကတော့ ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေပါပဲ ဘယ်ပွဲမှာ ရိုက်ခဲ့မိမှန်းတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ တစ်နှစ်လောက်တော့ရှိတော့မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော် ဒီပုံလေးတွေတင်တယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လိုစိတ်၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလိုစိတ်တွေ ဘယ်လောက်ရှိနေကြတယ်ဆိုတာကို သိစေချင်လို့ပါ။
ဒီဇိုင်နာရူပါရွှေရဲ့ လက်ရာ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတချို့ကို ရန်ကုန်မြို့ ဖက်ရှင်ပြပွဲတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လက်ရာ ဘယ်လိုတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ အားပေးကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။
အခုတင်ပြထားတဲ့ပုံတွေကတော့ တင်မိုးလွင်ရဲ့ T&M Model 2008 သင်တန်းဆင်းပွဲမှာ ဒီဇိုင်နာစုစုလှိုင်ပြသွားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါ။ သူ့ရဲ့ လက်ရာအ၀တ်အထည်တွေ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော့်လက်ရာဓာတ်ပုံတွေ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ဝေဖန်ကြစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် Tri Fashion Show မှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါ။ ၀တ်စုံတွေကတော့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ မရူပါရွှေရဲ့လက်ရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရာတွေ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ဝေဖန်အကြံပေးကြစေချင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပညာကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ ရိုက်စားသူတစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်လက်ရာတွေဟာ ကြမ်းတမ်းကောင်းကြမ်းတမ်းနိုင်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်တော့ထင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း ဓာတ်ပုံလမင်းနိုင်ရဲ့ လက်ရာများ
18 thoughts on “ဓာတ်ပုံ”
မြန်မာမလေးတွေက ဒါမျိုးတွေကို ၀တ်ရဲ့ပါမှလား
Posted by လမင်း | October 30, 2008, 5:27 pm ဘယ်ဟာမှကိုအလွတ်မပေးပါလား
Posted by khinpyi | December 20, 2008, 9:16 am မော်ဒယ်လ်တွေလည်း လန်း ဓာတ်ပုံဆရာလည်း လန်းပါတယ်။ ဟဲဟဲ မုန့်စားချင်လို့… (အသစ်ရှိလည်း တင်ပါဦး အားပေးနေပါတယ်)
Posted by လင်းအာရုဏ် | March 23, 2009, 9:32 am မြန် မာ မ အမျိုး သမီး တွေ အနေ နဲ့ ကော မြန် မာ ပြည် အနေ အ ထား နဲ့ ကော အ ချိုး မကျ တဲ့ ပုံ တွေ ပဲ နော်။ ဖန် တီး သူ တွေ အနေနဲ့ ဘယ် လို လူ တန်း စားအ တွက် လဲ တော့ မသိဘူး ကြည့် ရ တာ တစ် မျိုး ပဲ ။ ပုံ တွေက တော့ ကြည့် ရ တာ တော် တော် ကောင်း ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ ပညာ တော့ နား မလည် ပါ ။ အား ပေး လျက် ပါ။
Posted by ခခ | May 2, 2009, 9:14 am မော်လ်ဒယ်တွေရဲ့ လူပ်ရှားမှုတွေကို မလွတ်တမ်းရိုက်ပြနိုင်ပါတယ်..ဒါမျိုးပို့စ်တွေက အပျော်တမ်းရိုက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး..မြင်တတ်ပါတယ်
Posted by ayechan | May 8, 2009, 3:07 pm ဓာတ်ပုံတွေက အရမ်းလန်းတယ်။
ဓာတ်ပုံဆရာကလည်း လန်းတာကိုး :P
Posted by မိုးနေ | June 2, 2009, 6:34 pm ကောင်းတယ်။ အရမ်းမိုက်တယ်။ ကင်မရာမန်း တော်တယ်။
Posted by mintunkyaw09 | June 11, 2009, 9:30 am ဒါလည်းမှတ်တမ်းရှည်ရေးဖို့ အစီအစဉ်ထဲက subject တစ်ခုလား ။
Posted by Poisonrose | August 14, 2009, 5:49 am As usual Moe Hay Ko looks good..
How about green one… thats it man..
Posted by ကိုကြီးသာ | September 2, 2009, 3:52 pm ဓာတ်ပုံလေးတေကွ တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ…. ကျွန်တော်တို့ http://www.myanmarlensman.com ကိုလဲ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ မြန်မာဓာတ်ပုံချစ်သူများ၊ ၀ါသနာရှင်များ၊ ပညာရှင်များ… စုဝေးရာ နေရာလေး တစ်ခုပါ :)
Posted by Phil Kyaw | October 16, 2009, 7:41 am ခေတ်မှီတယ်လို့ခေါ်ရမှာလား
Posted by maychin | December 10, 2009, 11:17 am ခေတ်မှီပြီးဓာတ်ပုံလက်ရာမြောက်တာကိုတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်
Posted by မျိုးချစ် | December 30, 2009, 11:25 am min to
Posted by zayar | February 2, 2010, 6:51 am ဓါတပ်ပုံ ပညာရှင် ရဲ့ အဆင့်ကို ခန်းမှန်းလို့ရပါတယ်အလားတူဘဲမြန်မာ ဒီဇိုင်နာ တွေရဲ့ အရည်အချင်းက အဆင့်မှီပါတယ် -စီးပွါးရေး တိုးတက်လာတာနဲ့ အတူ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုကိုတော့ ဘယ်လိုမှ တားလို့ရမယ် မထင်ပါဘူး
Posted by အေးငြိမ်းသူ | February 21, 2012, 5:50 pm ဓါတ်ပုံတွေအားလုံးကို သေသေချာချာကြည့်ပြီးဝေဖန်ပေးရရင် … ဓါတ်ပုံတွေအကုန်လုံးကောင်းပါတယ်……အထူးသဖြင့် လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံတွေကို အမိအရ (အပိုအလိုမရှိ) ရိုက်ထားတဲ့ပညာကိုတော့ တော်တော်လေးစားပါတယ်… ရိုက်နည်းလေး(အယူအဆလေး)တွေသိခွင့်ရမယ်ဆိုရင် တော့ တင်ပေးပါဦး..ဖက်ရှင်ပိုင်းကတော့ သိပ်နားမလည်လို့ မဝေဖန်တတ်ဘူး…. …………………
Posted by aung min (aunglantar) | September 17, 2012, 2:51 am အားလုံးကောင်ပါတယ်
Posted by myant kin | October 5, 2012, 1:05 pm အခုလိုပုံတွေတင့ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Posted by myant kin | October 5, 2012, 1:10 pm ဓါတ်ပုံတွေကတော့ အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်လည်း ဓါတ်ပုံပညာကို လေ့လာနေလို့ ဓါတ်ပုံပညာလေးတွေကိုလည်း ဝေမျှပေးစေချင်ပါတယ်
Posted by ထွန်းထွန်းမင်း (ရွှေဘို) | November 29, 2012, 3:00 pm LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...